करिश्माकै अघि मनिषाले एक अर्काको गरे ता’रिफ (हेर्नु’होस भिडियो)
Homeसमाचारकरिश्माकै अघि मनिषाले एक अर्काको गरे ता’रिफ (हेर्नु’होस भिडियो)
March 12, 2021 admin समाचार 5437
मनिषा कोईरालाले आज ‘महामृत्युञ्जय मन्त्र’ आफ्नो स्वर’मा रेकर्ड गराएर सार्वज’निक गरेकी छिन् । आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट ‘महामृत्युञ्जय मन्त्र’ सार्व’जनिक गरेकी हुन् ।
उक्त का’र्यक्रममा मनिषा कोईरालाले नेपाली चलचित्र छेत्रकि सदाबाहार नायिका करिश्मा मानन्धरलाई समेत अतिथि’का रुपमा निम्त्याएकी थिईन ।कार्यक्रम सकिएसंगै करिश्मा मानन्धर र मनिषा कोईरालाले मिडियासंग अन्तरक्रिया गर्दै आफुह’रुको पहिलो भेटदेखि एक अर्काको सौन्दर्यताको चर्चा गरेका छन् । क
रिश्मा मानन्ध’रका अनुसार मनिषा कोईराला जब क्यान्सरबाट बिरामी भएकी थिईन त्यहि बेला पहिलो’चोटि भेट्न पुगेकी र केहि समय बिताएर चिनजान बढेको थियो । मनिषा कोईरालालाई पनि करिश्मा मानन्धरको चलचित्रहरु मनपर्ने र नेपालको सौन्दर्य नायि’काहरुमा करिश्मा अग्र स्थानमा पर्ने भन्दै तारिफ मनिषाले गरेकी छिन् । – इताजा खबरबाट
ओवा’दी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण’काजी श्रेष्ठले शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई फोन गरेर पार्टीले खोजिरहेको बताएपछि प्रभु शाह अचम्म परे । बुधवार अपराह्न पार्टी केन्द्रीय कार्या’लयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठककै बी’चमा श्रेष्ठले शाहलाई फोन गरेर पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेका हुन् ।
‘पार्टीले तपाईंलाई खोजि’रहेको छ,’ श्रेष्ठले फोनमा शाहलाई भने । त्यसपछि शाहले कुन पार्टी भनेर प्रश्न गरे । ‘माओवादी केन्द्र नि ! तपाईंलाई पर्खिरहेछ,’ सञ्चार’कर्मीकै अगाडि फोनमा बोल्दै श्रेष्ठले भने ।पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाह यतिबेला एमालेका अध्यक्ष ओलीनिकट बनेका छन् । प्रति’निधि सभा बैठकपछि ओलीले मन्त्री बनाएका थिए ।
ऊर्जा, जल’स्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नछाड्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले बिहीबार पोखरामा गरेको कार्यकर्ता भे’टघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रायमा’झीले सांसद पद अहिले आफू’लाई गौण कुरा भएको बताएका हुन् ।
‘विचार, राजनीति, योजना कार्य’क्रम जोगाउन लाग्ने कि संसद जोगाउन लाग्ने ? उहाँले भनिसकेपछि त विचार छोडियो भने विचलित भइन्छ’ मन्त्री रायमा’झीले भने, ‘मेरो अर्थमा सांसद पद गौण भा’छ अहिले । सांसद पद बचाउन हामी हिंड्ने पक्षमा छैनौं ।’सर्वोच्च अदालतकाे फैसलाले एमाले, माओवादी केन्द्र ब्युँ’तिएपछि उनी अहिले एमालेको पक्षमा लागेका छन् । माओवादीबाट चुनाव जितेका मन्त्री रायमाझी अहिले पार्टी ब्युँतिएपछि एमाले’तिर लागेका हुन् ।
मन्त्री रायमाझीले माओवादी केन्द्रले अर्को पार्टीसँग मिलेर सत्ता चलाउने अवस्था प’नि नरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रचण्डजी र माओवादी केन्द्रसित त हामी यसै पनि लडिराखे’का थियौं । जति छन् त्यतिले जसपा, कांग्रेस’सँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भा’वना एकदमै कम छ । एक प्रतिशत पनि छैन ।’
आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नपाएका, सचिनले विद्यालयनै ट’पे !
प्रचण्डको ता’गत छैन केपी ओलीलाई हटाउने, बिरालोले चिथर्न मात्र सक्छ ढाल्न सक्दैन- लालबाबु (भिडियो सहित)
कादर खानले अमिताभ लाई मृ`त्युको अन्तिम स्वास^सम्म पर्खिरहे , आखिर किन ? थाहा पाउनु^होस्
February 23, 2022 admin समाचार 2074
काठमाडौं । भारतीय चल’चित्रका प्रसिद्ध अभि’नेता कादर खानको जन्म २२ अक्टुबर १९३७ मा भएको थियो । कादर खान एक राम्रो हास्य कलाकार र खलनायक थिए, साथै एक संवाद लेख’कका रूपमा उनले धेरै सुपरहिट फिल्म`हरू दिएका
आजबाट श्रम स्वीकृति खुल्यो, अब वैदेशिक राेज’गारीमा जान पाइने…
September 1, 2020 admin समाचार 15987
सरकारले श्रम स्वीकृ’ति खुलाएको छ । वैदेशि’क रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि दिइ’ने श्रम स्वीकृति खुला’उने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कु’मार दाहालले जनाकारी दिनुभयो । आजैको दिनदेखि श्रम स्वी’कृति खुले पनि कुन कुन
December 8, 2020 admin समाचार 9089